Home Sheekooyinka Kubadda Cagta ee Aasiya Nemanja Matic Childhood Story Sheekooyin Xaqiiqooyin Wada-hadal ah
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'Beast'. Nemanja Matic Caruurnimadeena Sheeko iyo Wacdiyooyin aan la Xariirin Xaqiiqooyin waxay kuugu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa, hase yeeshee dadka yaryar ayaa naqshadeeya Nemanja Matic Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn: Nolosha Hore
Nemanja Matic wuxuu ku dhashay magaalada 1st ee August, 1988 ee Sabac, SFR Yugoslavia, Dragan Matić (aabaha) iyo Biljana Matić (hooyo) kuwaas oo ahaa labada ciyaaryahan.
Matić wuxuu ka mid yahay reer Makedoniya oo ka mid ahaa Yugoslavia iyo maanta Serbia. Waalidiintiisi waxay ahaayeen kuwo badbaadiya caruurnimada dagaalkii labaad ee aduunka. Labada Bosnia iyo Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia iyo Slovenia ayaa markii ugu horreysay ku midoobay Yugoslavia.
Waxa uu ku soo koray dhinac walbana walaalkiis, Uros labadaba kuwaas oo dhaxal galiyay waalidkood.
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Shaqo Dhallinyaro
Young wuxuu bilaabay xirfaddiisa isagoo shan jir ah (1993) oo uu la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Vrelo oo wakhtigaasi ahaa tababarahiisa aabihiis oo aasaasay aasaaska xirfadiisii ​​hore ee xirfadiisa ciyaareed. Marka da'da 10, waalidiinta Matic waxay u ogolaadeen inuu qaato talaabo dhiiri gelin ah oo arkay isaga oo ka tagaya guriga si uu u wajaho xirfad isaga oo aan faragelin aabihiis. Obrenovac 1905 wuxuu ahaa meeshii ugu horeysay ee sanadkan 1999.
Sheeko caruureed Nemanja Matic
"[Gurigaan ka tagaya] way igu adagtahay maxaa yeelay waxaan ahaa 9," ayuu ku daray. "Waxa kale oo ay ahayd talaabo aad u weyn oo ku saabsan mustaqbalkiisa ciyaareed ee Serbia. Ma ahayn mid aad u dhow meerteyda, sidaas darteed anigu ma soo laaban karin usbuuc kasta iyo markaad tahay wiil 9, waxaad dareemi kartaa xanuunka. Xilliyadii danbe, waxyaabo caadi ah ayay noqdeen. Kubada cagta ayaa shaqadayda ku jirtay, waana ku riyaaqay. Taageerada qoyskeyga ayaa caawiyay. Riyadeyda aan rabo inaan ciyaaro kubada cagta meel wanaagsan ayay noqotay "
Kadib wuxuu si guul leh u sii waday xirfaddiisa dhalinyaradii 3 kooxo dhalinyaro kala duwan oo kala ah Red Star Belgrade, Obrenovac 1905, Red Star Belgrade, Partizan, Jedinstvo Ub. Tani waxay u dhaxeysey 1997 ilaa 2005. Taageerihii hore ee aabihiis wuxuu fure u ahaa guulihii uu ka gaaray kooxahan. Matic waxaa loo yaqaan tababarka aad u adag isla markaana wuxuu noqonayaa ciyaaryahanka ugu fiican ee dhamaan kooxaha la soo dhaafay. Sanadka 1997 ee 2005 waxaa loo yaqaanaa sanadaha uu aad u dheeraa.
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Professional Career
Waxqabadka cajiibka ah waxaa lagu ogaaday Kolubara, halkaas oo uu bilawday xirfaddiisa xirfadeed sanadka 2005. Waxa uu kooxda ku soo biiray muddo seddex sano ah, laakiin ma uusan maamulin booska koowaad kow iyo tobnaad, isagoo ka dhigaya kaliya 16 muuqaalkiisa. Sidaas daraadeed nasiib daro wiilka yar oo dareemay xirfaddiisa ugu dambeyntii waxay u imanaysaa inay istaagto.
Halkii laga xayuubin lahaa murugadiisa, wuxuu bilaabay inuu u wareego kooxda Slovakia Košice ee 2007 kaas oo isaga u jecel.
Sidoo kale, inta uu ku noolaa dalka, wuxuu sidoo kale helay dhalashada Slovak.
Xaqiiqdii, waqti uu ku qaatay kooxda ayaa u muuqatay mid aad uwanaagsan u ah ciyaaryahanka, iyadoo tababaraha uu u arkayay inuu yahay ciyaaryahan aad uwanaagsan islamarkaana u ogolaanaya inuu garoonka sii joogo. Wadar ahaan, Serbian ayaa u saftay 70 waxaana u dhaliyay afar gool labo xilli ciyaareed. Dabeecadiisii ​​u adkeyd ee uu ku qaaday Chelsea ayaa indha indheynaya kooxda Chelsea. Chelsea ayaa si dhab ah u raadineysay bedelka Makalele xilligaas.
Nemanja Matic Shaqo Dhallinyaro
Xaqiiqdii 2009, kooxda ka socota Chelsea ayaa xiiseyneysa Matiic. 2009, xagaaga ayaa la saxiixay qandaraas laba sano ah. Wuxuu ku bilaabay noloshiisa London isagoo aan ku guuleysan, maadaama uu u muuqday mid si aan caadi ahayn u muuqday.
Erayadiisa, "Aad ayaan u yaraa," ayuu ku celiyay. "Xilligeyga waxa uu ahaa ciyaartoy waa weyn, Ballack, Lampard iyo Essien. Waxaan halkan ku soo gaadhay dhaawaca - waxaan ahaa afar bilood - sidaa daraadeed way igu adagtahay. Premier League ma ahan wax sahlan ciyaartoyda da'yarta, sababtoo ah waa ay adag tahay, waana adag tahay. "
"Laga soo bilaabo kooxda Slovakia inay yimaadaan Premier League ma fududa. Aniga ahaan waxay ii aheyd riyo, laakiin waxaan ahaa dhalinyaro waxaana ay ahayd khibrad fiican. "
Matic wuxuu aad ugu faraxsanaa inuu ogaado in amaah lagu siin doono Vitesse. Waxaa jiray meel udhaxeysa Chelsea iyo Vitesse taasoo qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda ka dhisan London ay ka heli karaan tababar ay ku qaadanayaan akadeemiyada kooxda reer Holland inta lagu guda jiro xilli ciyaareed.
Nemanja xilli ciyaareedkii 2010 / 2011 wuxuu ku qaatay kooxda ku meel gaarka ah, isaga oo laba gool ka dhaliyay 27. Erayadiisa, 'Portugal waxaan u isticmaali jiray inaan ka hor tago ciyaartoy yaryar waxaana ku guuleystay kubbada. Waxa ay ii sahlaneyd inaan ka ciyaaro horyaalka Premier League oo leh ciyaartoy dheer. "
Waxa ay aheyd Portugal, in xirfadiisa ciyaareed uu bedelay tababare Jorge Jesus.
Xagaagii 2011, Ciyaaryahanka Serbian ayaa go'aansaday inuu go'aan adag ka qaato noloshiisa. Burburinta marnaba ha noqoto amaah.
Matic ayaa u wareegay kooxda Benfica. Aad ayaan ugu faraxsanahay in Chelsea loo isticmaalo si ay u hesho David Luiz, wuxuu dareemay inuu ku qanacsan yahay inuu ka tago kooxda. Waxa uu ku biiray kooxda koowaad isla markiiba, waxaana uu ciyaaray kulamadii 95 waxaana uu dhaliyay goolal 9 kooxda reer Portugal seddex xilli ciyaareed. Inkastoo aan u ciyaareyno naadiga, Matic ayaa aruursaday wax aan la rumeysan karin. Kooxdiisa Chelsea ayaa ku jirta finalka Europa League. Xitaa haddii aad lumisay kooxdiis, waxa uu hubiyay inuu maalqabeen David Luiz. Taas ayaa Chelsea ka dhigtay inay dib u dhigto xiisaha ay u qabto isaga, waqtigaan oo uu rajeynayo inuu noqdo ciyaaryahanka koowaad ee doorashada.
Matic ayaa ku qanacsan David Luiz
Dhammaan waxa dhacay Janaayo 2014 marka Chelsea waxa uu sameeyay cabsi weyn oo ah inuu Serbia dib ugu soo laabto kooxdana waxa uu siiyay € 25. Inteeda kale, (Xitaa u dhaqaaqistiisa Manchester United) sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Nolosha Qoyska
Namanja Matic waxay ka timaadaa asal qowmiyadeed oo qoysaska ah. Waalidiintiisa Dragan iyo Biljana waxay dalkooda ku faanaan ciyaaraha. Matic aabihiis ayaa ahaa ciyaaryahan xirfadle ah, isagoo u ciyaaray FK Macva Sabac ee 1980siyada Serbia.
Matić walaalkiis ka yar, Uroš, sidoo kale waa ciyaaryahan xirfadle ah oo u ciyaara kooxda heysata horyaalka Denmark ee FC Copenhagen xilli ciyaareedka. Uros 'path of career' wuxuu la mid yahay kan walaalkiis labadoodaba labadoodaba waxay soo barteen aabahood waxayna raaceen siyaabo kala duwan.
Sheekada Uroš Matic
Mar hadana, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa aad ugu faraxsanyahay rajada uu u qabo inuu walaalkiis u ciyaaro Chelsea kooxda Champions League. Waxa ay aheyd mato yar Matic kaasoo ku dhamaaday guuldaradii.
Markii Nemanja Matic ay isku dhaceen Brother, Uroš
Uros mar uu isku dayay inuu la qabsado Nemanja guushii, laakiin wuu ku guuldareystay, wuuna sii daayay walaalkiis. Waxa uu arkaa walaalkiisa weyn sida qof riyadiisa ku nool.
In uu erayadiisa; "Nemanja ayaa noqon kara walaalkeey laakiin waxaan ahay ciyaaryahankeyga oo aan ku riyoodo riyadayda aan ku galo fc Copenhagen. Waxaan u maleynayaa inaan ka heli karo boos wanaagsan oo aan ku leeyahay kooxdaan iyo inaan magac weyn ku sameysto " ayuu u sheegay Goal.
Labadooduba waxay ku qaataan fasaxyada ay la wadaagaan asxaabtooda ugu fiican 'kubad' dhinacooda.
Walaalaha Wanaagsan - Namanja iyo Uroš Matić
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Nolosha Xiriirka
Intii uu ku jiray fasalka ugu horeeyay Chelsea, waqti ayaa arkay dhibaatooyin badan, Matic ayaa go'aansaday inuu naftiisa noloshiisa fursad u siiyo. Wuxuu la kulmay jacayl iyo Aleksandra Pavić oo sidoo kale ka yimid waddankiisa.
Nemanja Matic Nolosha Leh
In uu erayadiisa; 'Horumarka ugu fiicani waa awooddayga aan ku qancin lahaa Aleksandra si aan u guursado'. Labadoodba labadaba waxay lahaayeen aroos qarsoodi ah 2010.
Matic ciraaq Aleksandra
Nemanja Matic ayaa guursaday Aleksandra dhab ahaantii wuxuu ku guuleystay xirfadiisii. Waxay u siisay dhiirigelinta lagama maarmaanka ah ee uu ka maqan yahay. Waxay ka shakisan tahay tiirkiisa iyo dhiirigeliyaha. Labaduba waxay wadaagaan dhowr marxaladood oo guuleysta.
Aleksandra Pavić ayaa u dabaaldageysa ninkeeda
Nemanja iyo Aleksandra guurka waxay heleen duco. Labada wiilba waxay leeyihiin wiil.
Hoos waxaa ku qoran sawirka iyaga oo eegaya wakiilka guryaha marka ay isku diyaariyaan inay ka guuraan London ilaa Manchester.
Nemanja Matic iyo jacaylkiisa noloshiisa
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Bixinta Tilmaamaha tuuladiisa
Waxaa loo yaqaanaa dib u soo noqoshadiisa isaga oo ku sugan magaalada Sabac ee magaalada Marcedonia, Serbia. Wuxuu ka caawiyay tuuladiisii ​​inay dib u bixiso lacagtii hore.
Nemanja Matic oo ka tagay qeybta tuulada
Matic ayaa sidoo kale siiyay kooxdiisii ​​hore Obrenovac 1905. Wuxuu matxafka ugu deeqay kooxda.
Nemanja Matic wuxuu matxafka u hibeeyaa Old Club
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Dib ula midoobida khaaska ah
Matic ayaa ku farxay inuu dib ula midoobo macalinkii hore Jose Mourinho.
In Jose Mourinho ayaa ah erayada; "Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo rabitaankiisa inuu nagu soo biiro, sababtoo ah taas la'aanteed, ma ahan mid aan suurtogal aheyn inuu halkaan joogo. Waan hubaa in ciyaartoydeena iyo taageerayaasha ay isaga jeclaan doonaan. Ku soo dhawoow nambarkeena cusub ee 31. "
In erayada Matic; "Waan ku faraxsanahay inaan ku biiro Manchester United,". ayuu ku daray. "Si aan ula shaqeyno Jose Mourinho mar kale fursad ma aanan diidi karin. Tani waa waqti aad u xiiso leh kooxda, waxaana rajeynayaa inaan qeyb ka noqdo kooxdeyda inaan abuuro taariikh dheer oo kooxdaan weyn. ""
Jose Mourinho iyo Nemanja Matic jacaylkiisa midba midka kale waa kan labaad.
Bond between u dhaxeysa Nemanja Matic iyo Jose Mourinho
Mourinho wuxuu arkay iftiin cagaaran oo uu caqabad ku ahaa Matic ka dib markii uu ogaaday Antonio Conte khadka dhexe ee daafaca ka ciyaara Tiemoure Bakayoko, N'Golo Kante.
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Helitaanka caawimaad saaxiibtinimo hore
Matic waxaa lagu soo dhaweeyay tababarkii ugu horeeyay ee uu horay u soo qaatay Chelsea ciyaaryahan -Juan Mata oo isaga tusay agagaarka iyo ka caawiyay inuu dego.
Nemanja Matic ayaa la midoobi doona saaxibtiisii ​​hore
Labada Matic iyo Mata xiriir saaxiibtinimo oo wadaagaan intii ay ku jireen Chelsea FC.
Nemanja Matic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weyn:Doorashada Gawaarida
Ugu dambeyntii waxyaabaha ku saabsan Matic waa doorashada gaariga. Naadiyada kasta wuu tagaa, wuxuu dooranayaa inuu ugu yaraan leeyahay baabuur leh midab la mid ah maaliyada kooxda. Tani waa kiiska labadaba Chelsea iyo Manchester United sida hoos lagu arkay.
Matic ayaa doorbidaya inuu gaaro midabo kala duwan
Wuxuu jecel yahay Mercedes marka uu yimaado baabuur weyn.
Taariikhda Kubadda Cagta ee Serbia
Sheekada Carruurnimada Haris Seferovic Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Antonio Conte Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Memphis Deplay Childhood Story Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Diego Costa Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Daley Blind Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn